Mushure mekusiya Project Astoria, Microsoft yanga ichitsvaga nzira dzekuunza maapplication eApple ku Windows 10 uye yakatogonesa rutsigiro rwekufambisa kuburikidza neFoni Yako app yekusarudza mafoni eSamsung. Pfungwa yazvino yeMicrosoft ndeye "Project Latte", iyo ine chinangwa chekubatsira vanogadzira nharembozha yavo seMSIX uye kugonesa rutsigiro rwemuno kune Android subsystem. The… [Verenga zvakawanda ...] nezve Native Android app tsigiro ye Windows 10 ichiri munzira yekutangisa kwe2021
Maitiro Ekutendera Chete maAdmin Kutumira Meseji muWhatsApp Boka
Mameseji ezviziviso zvakakosha anogona kazhinji kurasika muboka rakazara reWhatsApp, kunyanya kana munhu wese achinyora panguva imwe chete. Asi kana iwe uri admin, heino maitiro aungaita kumbomira kutaura neruzhinji nekudzora kugona kutumira mameseji kwauri. Tanga iyo WhatsApp app pane yako Android smartphone, piritsi, kana iPhone, uye kubva pasi pe "Chats" tab, isa yako ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekutendera Chete maAdmin Kutumira Meseji muWhatsApp Boka
Chii chinonzi Yubo uye ndingachijoinha sei?
Kune asingaverengeki masocial apps kunze uko mazuva ano, achichemera kutariswa kwako, saka dzimwe nguva zvinogona kunetsa kuona kuti ndeapi anonyatsokodzera nguva yako yekusaina. Icho chinogara chiri chiratidzo chakanaka, zvakadaro, kana vamwe vanhu vachikwira neapp nyowani, uye sevhisi iri kutanga kutora kutarisisa kwehutachiona. Ndizvo zvirikuitika pano... [Verenga zvakawanda ...] nezve Chii chinonzi Yubo uye ndingajoinha sei nayo?
Chiratidzo, iyo yakachengeteka mameseji application, inosunga pachayo kune yako foni nhamba. Kuti uwane dziviriro kubva kune mbavha dzinokuba nhamba yako yefoni, unogona kugonesa Kunyoresa Kiyi, kudzivirira chero munhu kunyoresa imwe account nenhamba yako yefoni. Chii Chinonzi Kunyoresa Lock? Yako Signal account yakasungirirwa kunhamba yako yefoni, zvinoreva kuti hautombodi password kuti upinde… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekuvhura Kunyoresa Lock muChiratidzo